रामेछापको ६ गाउँपालिका र २ नगरपालिकामा एमालेबाट को–को बन्दै छन उम्मदेवार ? « Ramechhap News
रामेछापको ६ गाउँपालिका र २ नगरपालिकामा एमालेबाट को–को बन्दै छन उम्मदेवार ?
रामेछापको ६ गाउँपालिकाका प्रमुख र २ नगरापलिकाका मेयर को होला भन्ने चासो रामेछापमा निकै बढेको छ । रामेछापमा चुनावी सगर्मीसँगै उम्मेदवार को हुने बहस पनि चुलिएको छ । जिल्लामा कांग्रेस एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी अभियानलाई तिब्रता दिएका छन् । गाउँपालिका नगरपालिका र वडाका भेलामा तीनै पार्टी जुटेका छन् । गाउँ गाउँमा दैनिकजसो राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । पार्टीभित्र को उम्मेदवार हुने बहस र छलफल पनि सुरु भएको छ । उम्मेदवार छनोट गर्नको लगि कांग्रेस एमाले र माओवादी तीन वटै दलले कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छ । सोही अनुसार जिल्ला कमिटीले सम्भावित उम्मेदवारको बारेमा छलफल अगाडि बढाएको छ ।
रामेछापको ६ गाउँपालिकाका प्रमुख र २ नगरपालिमा को को उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा एमालेले आन्तरिक तयारी थालेको छ । उम्मेदवारको लागि पार्टीमा लबिङ गर्ने क्रम बढेको छ । एमाले रामेछापका एक नेताले रामेछाप न्युजलाई दिएको जानकारी अनुसार यस्ता छन एमालेबाट सभ्भावित र चर्चामा रहेका गाउँपालिका प्रमुख र दुई नगरपालिका मेयरका उम्मदेवारहरुः
मन्थली नगरपालिमा मेयरका आकांक्षी
रामेछापमा नगरपालिकामा मेयरका आकांक्षी